Ukubuyiselwa kweSemalt: Ukutyhila imifanekiso kwiiWebhsayithi
Namhlanje iwebhu inkulu kakhulu, kwaye ifikeleleke kakhulu . Abantu banokukopisha nokushicilela nasiphi na isithombe abasithandayo ngokulula. Kodwa ngaphambi kokuba benze njalo, kufuneka baqikelele ngobunikazi be-copyright - track my super.
Abantu abaninzi bathanda ukufumana imifanekiso emihle kwi-intanethi. Kulula, kwaye banokufumana nantoni na abayifunayo ngokukhwela kwi-intanethi. Enye yezona ndlela eziqhelekileyo kukukrazula imifanekiso kwiiwebhusayithi ezahlukeneyo. Kodwa ngaphambi kokukopisha umfanekiso, kufuneka bacinge ngokusemthethweni kwesenzo. Ngokomzekelo, kufuneka bathathe ingqalelo ukuba umntu unokuthi anayo le mifanekiso kwaye kufuneka acele imvume.
Ukutsalwa kwesithombe: I-'Thuluzi 'yabathengisi
Ukutsalwa kwezithombe yinkqubo yokukhuphela inani elikhulu lemifanekiso esuka kumthombo othile kwiwebhu. Isixhobo esinesixhobo kubantu abazama ukufumana imifanekiso efanelekileyo ukuhamba kunye namaphepha abo okanye iifemu zabo. Kodwa zonke ezi zithombe zivela phi? Kukho iiplani ze-intanethi, ezibonelela ngeendwendwe ezineenkcukacha ezikhoyo. Kodwa ukuba abayifumani umfanekiso ochanekileyo, basebenzisa iGoogle ukufumana iifoto ezithandekayo kubo. Ngenxa yoko, ukuhlenga umfanekiso kufana nesisombululo kuphela kubo.
Ngaba i-Image Scraping Legal?
Namhlanje amashishini amaninzi, kunye nabantu ngabanye, bafumana yonke imifanekiso abayifunayo ngomsebenzi wabo kunye nezithuba kwi-intanethi. Kodwa abantu kufuneka baqaphele ukuba ukukhangela imifanekiso ngobuninzi kungabi mthethweni. Into ebaluleke kakhulu kubantu abaqhekeza imifanekiso kufuneka baqaphele ngemali yemifanekiso yabo. Kubalulekile ukufumana umfanekiso ochanekileyo, uyithumele kwiindawo ezahlukeneyo ze-intanethi, ezifana ne-Facebook okanye i-Twitter. Abantu abaninzi bafuna ukuthatha umfundi
Ukusetyenziswa ngokufanelekileyo kweMifanekiso
Ukuba unqwenela unako ukusebenzisa iifoto ozithathileyo ngokwakho. Ngaphandle koko, kufuneka ufumane isithunzi kwi-intanethi. Kukho imithombo emininzi ye-intanethi apho abantu banokukhangela imifanekiso. Nangona abantu bekhululekile ukucoca nayiphi na imifanekiso abayithandayo, kwiimeko ezithile kufuneka bacele imvume. Ukuba umnini angavumelani, kungcono ukuzama ukufumana ezinye iimifanekiso ezifanayo kwezinye izixhobo Uninzi lwabanikazi bewebhu bazimisele banikele iifoto zabo mahhala. Ukuphepha yonke imiphumo yomthetho, abantu kufuneka bacinge ngezinto ezithile. Ngokomzekelo, akufanele bakopishe imifanekiso yabantu abadumileyo ababandakanyeka kwimisebenzi yabucala.
Abaninzi beefoto kunye nabaculi bathumela imifanekiso yabo kwi-intanethi ukuyithengisa. Abantu bangalingeka ukukopisha umfanekiso kunye nokuguqula, kodwa oku akusiyo isisombululo somthetho. Kufuneka bakhumbule ukuba umthetho we-copyright unika onke amalungelo emifanekiso kumnini-copyright. Oku kuthetha ukuba umnini ngumntu kuphela oya kugqiba apho umsebenzi wakhe uya kushicilelwa kwaye ngubani oza kusebenzisa imifanekiso yakhe.
Nangona ukukhangela imifanekiso kwiiwebhusayithi kungaba ngumsebenzi olula kubavuni, kufuneka baqaphele. Ngokomzekelo, akufanele bakopishe imifanekiso yabantu kunye nokuhlonipha umthetho we-copyright. Ukuba benza njalo, ukuhlutha umfanekiso kungabakho isixhobo esikhulu kunye nesibalulekileyo kubo kunye nezoshishino zabo.